२०७७ जेठ १३ मंगलबार ०६:५८:००
पोखरा महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षमा पत्येक वडामा पब्लिक कम्पनीको स्थापना गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ । त्यससँगै आफ्नै बैंक स्थापना गर्ने योजना पनि महानगरले बनाएको छ । यसका लागि सहरी योजना आयोगले महानगरको ३८औँ कार्यपालिका बैठकमा अवधारणा पेस भएर छलफल अगाडि बढाइसकेको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
यिनै योजनामा टेकेर महानगरले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । यसरी स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमार्फत उत्पादनमा लगाउने र महानगरका थप ४० हजारजनालाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखिएको छ । यस्ता पब्लिक कम्पनीमार्फत उत्पादित वस्तु तथा सेवा अन्य उत्पादकले भन्दा गुणस्तरीय र सस्तोमा उपभोक्तालाई उपलब्ध हुने उनले दाबी गरे ।
त्यसका लागि ७ अर्ब २० करोड लगानी हुने उपाध्यक्ष डा. लामिछानेले बताए । ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महानगरले लगानी गर्ने र त्यति नै रकम नगरवासी नागरिकले लगानी गर्नेछन् । प्रत्येक घरले निश्चित रकम सेयर हाल्ने र त्यहीअनुरूपको स्वामित्व रहने उनले बताए । लगानी गर्न नसक्ने परिवारका लागि महानगरले नै रोजगारी दिएर त्यसको पारिश्रमिकबाट लगानी जुटाउने योजना उनले सुनाए ।
त्यसैगरी, धनीले पनि समान हैसियतमा यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नेछन् । जसका कारण कोही धनी र कोही गरिबको भावना नगरवासीमा नहुने डा. लामिछानेको तर्क छ । ‘लगानी गर्न नसक्ने नागरिकलाई महानगरले रोजगारी दिन्छ । उहाँहरूलाई समस्या आउन नदिई लगानी गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ । धनी नागरिकले पनि धेरै सेयर हाल्न पाउँदैन । समान सहभागिताले कोही धनी र कोही गरिब भन्ने धारणा आउँदैन र सबैको लगानी भएकाले सबै उत्पादनमा जोडिनुहुन्छ,’ डा. लामिछानेले भने ।
फिस्टेल अस्पतालको लापरबाहीले सांसदसहित दुई सयजना क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य
अपहरण गरेको आरोपमा वडासदस्यसहित तीनजना पक्राउ
जिपको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई प्रहरीको मृत्यु
पोखरामा मंगलबार रातिदेखि लकडाउन
पोखरा महानगरलाई सोलारबत्ती घाँडो : मर्मतमै ३१ लाख लाग्ने